★မြန်မာ့အလင်း★: မိုနှာမက်နှင့် သူချွေးမ၏ အချစ်ဇတ်လမ်းဗီဒီယို… ဒန်း.. ဒန်း… ဒန်း
မိုနှာမက်နှင့် သူချွေးမ၏ အချစ်ဇတ်လမ်းဗီဒီယို… ဒန်း.. ဒန်း… ဒန်း
(ကို LOL ကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ အခုလို အင်မတန်ဖိုးရှိတဲ့ မိုနှာမက်နှင့် သူ၏ ချွေးမဇတ်လမ်းလေးပါ။ ကို freeburma နဲ့ ကို gaw dama myat swar ka lar တို့ နှစ်ယောက် အင်မတန်ကိုကြည့်သင့်သည် ထင်ပါသည်)
ဒီယိုကတော့ မိုဟာမက်နဲ့ သူချွေးမ၏ အချစ်ဇတ်လမ်းလေး အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားရုပ်ရှင် ထက်ပင်ကောင်းပါတယ်။ မွတ်ဆလင်များ အထူးပင်အလေးထားသည့် Quran ကျမ်းကြီးထဲမှရေးသားချက်များကို ကာတွန်းလေးနဲ့ သရုပ်ဖေါ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာ Aisha က သူ့ချစ်ချစ် အသက် ၅၂ နှစ် မိုနှာမက်ကို သ၀န်သိုနေတာလေးကလဲ တကယ်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီကာတွန်းထဲမှာ မိုဟာမက် သူတောင်းစားပုံဆွဲထားတာ အပုတ်ချချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီကောင်ဟာ ခေါင်းမှာ သန်းအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ Hadith မှာ ရေးထားပါတယ်။ ကဲကဲ.. မုဒိမ်းကျင့်ခံရလို့ မွတ်ဆလင်ဖြစ်လာတဲ့ ကုလားများ ကြည့်တော်မူကြပါ။ မင်းတို့အဖိုးအဖွားကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ မိုနှာမက် ယှဉ်ကြည့်စမ်းပါ
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 1:00 PM
LOL wants to kill islamic relegion n he trying so hard to find dirty drawing n cheating thing..must be tireding for him naw. but for us islam who deal gentleman way we avoide cheating n creating nonscence. so lets talk about world's recorded history. if mohamed(sol) living with his in-law daughter..when min done minn go to open his mother chin htaung n ko may ko tat loe ... which one is still nicer? u all think by urself. mohamed(sol)name was listed in world's record as most influencial person in the world cos his teaching n bibble were followed by people until now which is thousands of years. y ? koran show the way to success in short time as they all pass difficult time to know it n they handed to new generation's success in short time..interms of social life, economy, science, medicine fields etc.. thats y even bush (ex. Us president learned koran n they use the stretegies in koran for their life time success)..found success in short time. when everybody licking American ass in the world muslim is the only one who can hit down world trade center as cutting throat of fcking american...with aeroplane. can see clearly big people think big did historic matters. but budha myat swar ka lar ..he is lazy ka lar came from india. indians are who rape thi baw min myo tat loe datamyo..thi baw min myo tat loe dat ka lar myo gaw da ma myat swar ka lar ko pyan koe kwal dar .. bal idiiots tway phyit ma lal naw ? besides gaw da ma myat swar ka lar got lee ..so he also lee taung dal n tat loe dal to main ma but lote ma kway nai bar..give away to suzakar pon nar lee sar kway pyit lite tal..ko main ma ko lote ma kway bar ..main ma hta main nar khoe sarr pee ...main ma nat the mee dway ko thu myat lee sar kway dar ..ga bar mhar lazy gaw da ma myat swar ka lar looser ta yauk pae shi bar dal kha mya ...dan...tan...tan thout ..thout..thout... :P
ဘာ language လဲဟ မျက်စိတောင်မူးသွားတယ် :)
စိတ်တွေလျှော့ပါ။ အစ်မတို့တွေ မွတ်ဆလင်ကို ယုံကြည်လို့ပြောင်းလာတာ မဟုတ်ပဲ အာရပ်တွေက အစ်မတို့အဖိုးကိုသတ်၊ အဖွားကို မုဒိမ်းကျင့်ပြီး အတင်းအဓမ္မပြောင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်ပါပြီ။ . . . . အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်ပါပြီ။ . . . အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်ပါပြီ။ အစ်မတို့ အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ အေးမြတဲ့ ဗုဒ္ဓဓမ္မရိပ်ကနေ ကြိုဆိုနေပါတယ်
whatatypical rude Muslim bitch...